ဒေါက်တာ ဇင်ထွန်း ● စဉ်းစားစရာ ကနေဒါ ပညာရေးအကြောင်း အဆိုး အကောင်း - MoeMaKa Media
Home / Analysis / Dr Zin Tun / Education / ဒေါက်တာ ဇင်ထွန်း ● စဉ်းစားစရာ ကနေဒါ ပညာရေးအကြောင်း အဆိုး အကောင်း
ဒေါက်တာ ဇင်ထွန်း ● စဉ်းစားစရာ ကနေဒါ ပညာရေးအကြောင်း အဆိုး အကောင်း
Analysis, Dr Zin Tun, Education
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၉
RASU မှ BSc (Physics) ရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာ နှစ်၄၀ ရှိပါပြီ။ ဒီကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာရေး စံနစ်"သစ်" တွေ အနည်းဆုံး ၃ - ၄ခု ပေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစံနစ်ကို ကျွန်တော် လုံးဝ မသိပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ စံနစ်ကို ဘယ်လို ပြု ပြင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အကြံမပြုနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နေတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ပြည်နယ်ရဲ့ ပညာရေးစံနစ်နဲ့ အဲဒီစံနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို ပြောပြပါရစေ။ ဒီက အတွေ့ အကြုံပေါ် မူတည်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ဘွယ်များ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ကနေဒါရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းများမှာ၉ တန်း မှ ၁၂ တန်း (Grade9to 12) အထိ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် အသက် ၁၈နှစ်မှာ ၁၂တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုပညာ ကောလိပ်သွား ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်အတွင်း အထက်တန်း ကျောင်းသားများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း တနင်္ဂနွေနေ့များမှာ စာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိက ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပါမယ်။ ကျွန်တော်ပြောမဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အထက်တန်းကျောင်းသားတွေပါ။ တက္ကသိုလ်မှ နှစ်ကြီး ကျောင်းသားများနှင့်စာလျှင် အုတ်အရောရော ကျောက်အရောရော ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကို အမှတ်ရပါ။
ကျွန်တော် စာသင်ပေးရသူတွေထဲမှာ ပညာအဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းမှာ မသင်သေးသော်လည်း မိမိဖာသာ လေ့လာပြီး ရှေ့တန်းရောက်နေသူတွေရှိသလို အထက်တန်းရောက်သော်လည်း မူလတန်းစာ မကျေသေး သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အစွန်းနှစ်ဖက်က ဥပမာများ ပေးပါ့မယ်။
Grade10 ကျောင်းသား တယောက်တွေ့ဖူးတယ်။ သူက International math Olympiad ဝင်ဘို့ ပြင်ဆင်နေသူပါ။ Differential and integral calculus သူ့ဖာသာ လေ့လာပြီးနေပြီ။ သင်္ချာကောင်းတဲ့အတွက် Physics နဲ့ Chemistry ကိုလည်း ကျောင်းမှာသင်တာထက် ပိုမို လေ့လာထားပြီး တော်တော် ခရီးရောက်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဉာဏ်စမ်း အဖြစ် "70kg လေးတဲ့ လူတယောက်ကို သယ်နိုင်တဲ့ Hydrogen သို့မဟုတ် Helium balloon ရဲ့ အရွယ်ကို အခု ချက်ခြင်း တွက်ပေးပါ" လို့ ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော် လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ Approximate answer ကို ၁၅ မိနစ်လောက်အတွင်း သူမှတ်မိတဲ့ အချက်အလက်များကို သုံးပြီး (ideal gas law, atomic weight of N2, etc.) တွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ - အဆိုးဘက်က ကြည့်ကြရအောင်။ Grade 11, 12 ရောက်နေသော်လည်း အလီ ကောင်းကောင်း မရသူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒီမှာက ဘာကိုမှ အလွတ် မမှတ်ခိုင်းဘူး - ဆိုတဲ့ Dogma ကို အခြေခံတဲ့ ပညာရေးစနစ်ပါ။ ဒီတော့် အလီမကျက်ခိုင်းဘူး။ လုပ်ရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေး တတ်သွားမယ်လို့ ပညာရေး ပညာရှင်ကြီများ (Education guru) များက ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပျင်းကြီးပြီး ဘာမှ မလုပ်တဲ့ ကလေးက ဘယ်လိုလုပ် တတ်မှာလည်း။
နောက်တချက်က စာမေးပွဲကျလျှင် ကလေးစိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ တနှစ်တတန်း တင်ပေးတဲ့ကိစ္စ။ ဒါနဲ့ဘဲ Grade 12 သာ ရောက်လာတယ်။ Number system ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူး။ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄... Positive integer ကကို မတက်ဘူး။ မင်းတို့ ဂဏန်း ၂ လုံးပေါင်းတတ်သလား မေးလျှင် ပေါင်းတတ်တယ်လို့ အားလုံး ဖြေကြတယ်။ သို့သော် Positive integer နဲ့ negative integer ကို ပေါင်းခိုင်းကြည့်။ မပေါင်းတတ်သူတွေ အများကြီးဘဲ။ အပိုင်း ဂဏန်း လည်းမတတ်၊ ဒသမစံနစ်လည်း နားမလည်။ အဲဒိလောက် Maths ညံ့နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ် Science သင်မလဲ။ ဒဿမ စံနစ်ကို မတတ်ရတဲ့ အကြောင်းက စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်။ ဒီမှာ ဒဿမစံနစ်ကို သီးသန့် မသင်ဘူး။ $1 မှာ 100 cent ရှိတဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံအကြောင်း သင်ရင်းနဲ့ ဒဿမစံနစ်ကို တတ်သွားမယ်လို့ Guru များက ဆိုကြတယ်။ ကျွန်တော် တွေ့တာတော့ ပိုက်ဆံအကြာင်းလည်း သေသေခြာခြာမသိ၊ ဒဿမလည်းမတတ်တဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေဘဲ များလာတယ်။ အဲဒီလို ကျောင်းသားများအတွက် ကျွန်တော်မေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းက "Write five cent numerically"
ကျွန်တော် လက်ခံနိုင်တဲ့ အဖြေမှန်များ - 5cent သို့မဟုတ် $ 0.05
တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အမှားများ - 0.5cent, $0.5, 0.05cent ။
0.5cent ဆိုတာမှားတယ်။ 0.5 ဆိုတာ Half ။ ဒီတော့် မင်းရေးတာ Half-a-cent ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောလျှင် မျက်လုံး ကြောင်တောင်နဲ့ ပြန်ကြည့် ခံရတယ်။ ပြသနာက 0.5 = 1/2 ဆိုတာကို မသိဘူး။ အဲဒိလို ကျောင်းသားတွေ အတော်များများ တွေ့ရတယ်။
နောက်ပြသနာတခုက calculator ကို လုံးဝအားကိုးနေတဲ့ ကိစ္စ။ 10% ကို calculator မပါဘဲ မတွက်တတ်သူတွေ တော် တော်များတယ်။ 50%, 25%, 33% စသည်ကတော့ အလွန်ခက်ခဲသော ပြသနာကြီးများ ဖြစ်ပြီ။ Grade 8 ကျောင်းသူ တယောက် - ဂဏန်းတခုကို ၁၀ နဲ့မြောက်ဘို့ Calculator လိုတယ်။
ကဲ ဒီတော့ စာဖတ်သူတို့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလည်း။ Canadian ပညာရေးစံနစ် အောင်မြင်ပါသလား။
ကနေဒါရဲ့ ပညာရေးစံနစ်ကို နမူနာထားပြီး အချက် ၂ ချက် ပြောလိုပါတယ်။ ပထမအချက် - နိုင်ငံခြားမှာ သုံးနေတဲ့ ခေတ်မှီ စံနစ်ဆိုတိုင်း အထင်မကြီးပါနဲ့။ အဲဒီစံနစ်က မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ အထဲမှာ ချာတူးလံတွေ တပုံကြီး။ ဒုတိယအချက် - တော်တဲ့ ကျောင်းသား ကြိုးစားလိုတဲ့ ကျောင်းသားဟာ ဘယ်လောက်ပဲဆိုးတဲ့ စံနစ်နဲ့ ကြုံပါစေ သူ့ဖာသာ လေ့လာပြီး တတ်သွားမှာဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် တက်နေတုံး (1960s, 70s, 80s ) အတွေ့အကြုံအရ ဒီစကား မှန်တယ်လို့ သိပါတယ်။ အခုခေတ် E-books, internet စသည်တို့မှ အထောက်အကူရတာကြောင့် ပိုလို့တောင် မှန်ဦးမယ်။
တော်တဲ့ ကြိုးစားတဲ့ ကျောင်းသားဟာ သူ့ဖာသာ (Self study) လေ့လာပြီး တတ်မှာဘဲလို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်လျှင် နောက်တဆင့်ပြောလို့ ရတာက အားလုံးအတွက် အကျိုးအများဆုံးဖြစ်ဘို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ပညာရေးစံနစ်ဟာ (An education system optimized for all kinds of students) ထိပ်ဆုံးပိုင်း ကျောင်းသားများအတွက် ဖြစ်ဘို့ မလိုဘူး။ တခုဘဲ သတိထားရမှာက သူ့လောက်မှ မတော်တဲ့ ဆရာက ကျောင်းသားကို အပြစ် မပြောမိဘို့ discourage မလုပ်မိဘို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါဆိုလျှင် ထိပ်ဆုံးကျောင်းသားများ အတွက် လိုအပ်ချက်က ပြီးပြေ့စုံပြီ။ ဒီတော့ Optimized ပညာရေးစံနစ်ဟာ အလယ်အလတ်တန်း ကျောင်းသားများအတွက် ဖြစ်ရပါမယ်။ အခုပြောနေတာက high school level အတွက်နော်။ University များအတွက် မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် MSc, PhD level တွေမှာ ထိပ်ဆုံးကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်ရမယ်လို့ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ High school level မှာ ထိပ်ဆုံးကိုမှန်းလျှင် အလှမ်းကျယ်ပြီး အလယ်လပ် နေမယ်လို့ ပြောတာပါ။ စာဖတ်သူ ဆရာ၊ ဆရာမများ ဘယ်လို ထင်ပါသလည်း။
အခုဆက်ပြောလိုတာက ဘယ်ဟာကိုမှ အလွတ် မကျက်ရဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆ။ အမြဲ မမှန်ပါဘူး။ ဥပမာ အလီ။ ၁၂ အလီလောက် အထိ ကတော့ ငယ်ငယ်မှာ အလွတ်ကျက်ခိုင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။ အလီမရလို့ နောက်ပိုင်း ကြုံရမဲ့ ပြသနာတွေ အကုန် ပြေလည်သွားတယ်။ ရူပဗေဒ မှာလည်း ထို့ အတူဘဲ။ အချို့သော Formula တွေဟာ Fundamental မဟုတ်သော်လည်း မှတ်မိလျှင် Practicing physicist တယောက်အတွက် အလွန် အသုံးကျတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သုတေသန နယ်ပယ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ constant များ၊ Conversion factor များကိုလည်း မှတ်မိသင့်တယ်။ ဒါမှ အစည်းအဝေးတွေ Seminar or conference တွေမှာ သူများပြောတာကို စိတ်တွက်နဲ့ လိုက်တွက်ကြည့်ပြီး ယုတ္တိ ရှိရဲ့လားလို့ ချိန်ဆနိုင်မှာပေါ့။ ကျွန်တော် နီးနီးစပ်စပ် အလုပ်အလုပ်ဖူးတဲ့ ထိပ်တန်းရူပဗေဒ ပညာရှင် အားလုံ Approximate calculation လုပ်ရာမှာတော်ကြတယ်။
နောက်ဆုံး ပြောလိုတာက "နားလည်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်။ ရူပဗေဒ ဆရာ၊ ဆရာမများက သူတို့ရဲ့ ကျောင်းသား တွေကို နားလည်ဘို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ ဒီတော့် ကျွန်တော်မေးလိုတာက နားလည်တယ်ဆိုတာ ဘာလည်း။ ကျွန်တော်တို့ တတွေ အကြောင်းအရာတခုကို ကြားတဲ့အခါ၊ သို့မဟုတ် စာတပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ မိမိဖာသာ နားလည်မလည် ဘယ်လို ဆန်းစစ်ကြမလည်း။ အဲဒီမေးခွန်းအတွက် ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ လမ်းညွှန်တခု ရှိပါတယ်။ နှစ်စမှာ ကျောင်းသားများအတွက် ပေးတဲ့ Handout နဲ့အတူ ထည့်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ လမ်းညွှန်ကို ဒီ FB အုပ်စုပါ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝေမျှပါရစေ။
How to study Science and Math on your own
After reading each sentence, pause and assess your level of understanding by asking yourself the following questions.
1. Do I know every word in the sentence? Keep in mind that many words used in science and math have specific meaning according toadefinition. Examples: work, force, pressure.
2. Is thisanew knowledge for me or something I already know? It is entirely possible that the sentence you have just read is saying something you know but inadifferent way. Try paraphrasing without changing the meaning of the sentence.
3. Once you have decided that you are learning something new, ask yourself: . Does it agree with everything I know, or consistent with what I intuitively expect based on my experience?
If you sense any disagreement or inconsistency, something is wrong. Perhaps your pre-existing knowledge is not right. Or, you are not interpreting the new knowledge the right way. Whatever the reason, resolving the issue is essential.
Understanding sentence by sentence as described above is the end goal. However, it is equally important to avoid getting stuck. Keep in mind that sometimes it helps to read the whole chapter to get an overview, then read it again. If you do not gain full understanding after second or third reading, it is time to seek help fromateacher.
အထက်ပါ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်နည်းကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ် ကတည်းက သုံးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် စဉ်းစားနည်း စိတ်အစဉ် (thought process) က အထက်မှာရေးထားသလောက် စံနစ်မကျပါ။ အထူးသဖြင့် တတိယ (#3 step) အဆင့်။ တခုခုကို နားမလည်လျှင် စိတ်ထဲမှာ ဘဝင်မကျ ဖြစ်နေတာသာရှိတယ်။ အဲဒီ စိတ်အခြေအနေကို တိတိကျကျ မဖေါ်ပြနိုင် ခဲ့ပါ။ ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လို Self study လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြရတော့မှ ကိုယ့်ဖာသာ ပိုပြီးနားလည် သဘော ပေါက်ပါတယ်။ Understand ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် "နားမလည်ဘူး" ဆိုတာ အချက်အလက် အသစ်ဟာ ကိုယ် သိပြီးသားများနှင့် မဆီလျှော် အံမဝင် ခွင်မကျ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီအဆင့်ကို လွန်မြောက်ပြီးတော့မှ "နားလည်ပြီ" လို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။
မိမိရဲ့ နားလည်မှု ဆန်းစစ်နည်းကို ရူပဗေဒအတွက်သာမက အခြားသော ပညာရပ်များကို လေ့လာဘို့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေများ ဆိုပါစို့။ ဒီ အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ မိမိရဲ့ နားလည်းမှုကို ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ တခု သတိထားရမှာက ဗုဒ္ဓစာပေမှာပါတဲ့ စကားလုံး တော်တော်များများကို မြန်မာလို ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ သိတယ်လို့ ထင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ မှားနေတတ်ပါတယ်။ ပထမ (#1 step) အဆင့်ကို အတော် ဂရုစိုက်ရတယ်။ ဥပမာ ဒုက္ခသစ္စာ မှာပါ "ဒုက္ခ" ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ နေ့စဉ်သုံး အဓိပ္ပာယ်ထက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ကတော့ ဗုဒ္ဓစာပေကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်တာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ စဉ်းစားရာမှာ မြန်မာ အဓိပ္ပာယ် အမှားတွေ ဝင်ပြီး ရှုပ်မနေ တော့ဘူး။ ပါဠိလို ဖတ်တတ်လျှင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော် ပါဠိ မတတ်ပါ။
အစမှာ စကားခံခဲ့တဲ့အတိုင် ကျွန်တော့်ရဲ့စာမူဟာ မြန်မာ့ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အထောက် အကူဖြစ် မယ် မထင်ပါ။ သို့သော် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် စဉ်းစားစရာအချက်များ ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာ ဇင်ထွန်း ● စဉ်းစားစရာ ကနေဒါ ပညာရေးအကြောင်း အဆိုး အကောင်း Reviewed by Aung Htet on 8:27 PM Rating: 5